KZN Christian Social Services, Pomeroy | News24
KZN Christian Social Services, Pomeroy
Ihhovisi Lezenhlalakahle ElisePomeroy Lifuna ukufuniswa izihlobo Zalaba abalandelayo .Onolwazi sicela athintane Nosonhlalakahle kulezinombolo ezilandelayo 0346621170
1. Sithole Samukelisiwe owazalwa ngo 2005/04/01 ezalwa Sithole Brightness Nikeziwe ongasekho sicela ukufuniswa izihlobo zikababa wengane .
2. uThandeka Ndawonde owazalwa ngo 2001/10/07 ezalwa uNtombikayise Prim-Rose Ndawonde sicela ukufuniswa izihlobo zikababa wengane.
3. uSiyabonga Sanele Dlamini owazalwa ngo 2007/07/25 ezalwa uNomusa Dlamini, sicela ukufuniswa izihlobo zikababa wengane.
4. uPhelelani Mntungwa owazalwa ngo 2011/01/28 ezalwa uNonhlanhla Khombisile Mntungwa, sicela ukufuniswa izihlobo zikababa wengane.
5. uAphiwe Malinga owazalwa ngo2006/08/02 kanye no Aphele Malinga owazalwa ngo 2012/10/26, kanye no Ntandoyenkosi Amkele Malinga owazalwa ngo 2011/08/06, abazalwa ngu Kwenziwe Malanga, sicela ukufuniswa izihlobo zikababa wezingane
6. uAmanda Dlamini owazalwa ngo 2008/10/28, kanye no Nompumelelo Dlamini owazalwa ngo 2007/06/09 abazwalwa ngu Nomusa Ignatia, sicela ukufuniswa ubaba walezingane